Yakatumirwa ne Tranquillus | Apr 11, 2020 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Iwe wakaronga kunyorera bhonasi, kudzidziswa kana kuwedzera mubairo. Usati waita chiito, ita chero chinotora kuratidza basa rako. Kana iwe ukaita zvakapetwa kaviri sevamwe, asi hapana anoziva nezvazvo. Uri kutambisa nguva yako, unofanirwa kufunga zvekunyora mushumo wezuva nezuva.
Chirevo chezviitiko zvezuva nezuva, chei?
Munguva yekushongedza matanho, iwe unogona kunge usina kutungamidzana nekubatana kwako kwenzvimbo. Iwe unogona kungomanikidzwa kutsiva mumwe waunoshanda naye kana mutariri wako. Kunyora chinyorwa chezviitiko zvezuva nezuva zvinopa mufananidzo wakajeka webasa rako. Iyeye munhu (s) ane basa rekutarisa unogona kushandisa gwaro iri kuita zvisarudzo zvavo. Kuronga basa rako kuchave kuri nyore. Kana mukuru wako achinyatsoziva zvauri kuita uye zvauri kuronga kuita. Mumwe anogona kufungidzira kuti iwe haunganyanyo kuvhiringidzwa neiyi meseji kana nhare yake ichirira.
Mashokoi anofanira kubatanidzwa mumushumo wake webasa?
Izvo zvinosanganisira kuunza zvese zvinodiwa zvinhu, ruzivo rwese rwunokutendera kuti uve nekutarisa nezve ese mabasa akaitwa mukati mezuva. Basa rakaitwa, iro basa rakarongwa, matambudziko akasangana pamwe chete neaya anogadziriswa. Iye achakubatsira iwe, sevamwe vese vakanganiswa nechiito chako, kuti uende munzira kwayo. Chero ani anoziva zviri kuitika uye kana zvichizoitika, hatifambi mukujeka. Kana iwe uri munzira chaiyo, isu tinokufadza uye kana iwe wakanganisa isu tinokuudza nekukurumidza zvikuru. Hapana achakwanisa kutora pamusoro pebasa rako. Gwaro iri rinogonawo kushanda sehwaro hwebvunzurudzo yako yegore, semuenzaniso.
VERENGA Chii chinotsanangura kutya kunyora?
Mienzaniso yemushumo wezuva nezuva nhamba 1
Mumuenzaniso wekutanga uyu, mutungamiri wechikwata anoudza maneja wake nezve mamiriro ari kubasa. Iye pachake akaraswa pamba kwemazuva gumi nemashanu. Mazuva ese anomutumira email pakupera kwezuva. Mumhinduro yake, mutungamiri wake anomuudza zvikanganiso zvekudzivirira uye mhinduro dzinonyanya kushanda dzekugadzirisa zvimwe zvinetso.
Chinyorwa: Chiitiko chekutaura cha 15/04/2020
Zvishandiso uye chigadzirwa chekutangisa kutonga
Management of masheji
Passage kubva saiti kuenda kune saiti kutarisa kutevedzera covid19 matanho
Service chiitiko manejimendi
Tsamba uye foni kufona manejimendi
Mabasa anoenderera mberi
Kudzidziswa uye kuongororwa kwevashandi vatsva
Kugadziriswa kwenzvimbo uye zvemidziyo yekuchenesa
Kuronga mitsva nzira uye kuronga carpooling
Kudhindwa kwezvibvumirano zvitsva zvekukanganisa vatengi
Kukurukurirana kwezvematongerwo enyika kune manejimendi
Yeuchidzo kuzvikwata zvese zvekuchengetedza uye nehutsanana mitemo
Risiti yemirairo yezvigadzirwa uye maadha matsva kana zvichidikanwa
Bhadhara zvinhu zvinotsvedza
Kuchengetedza kwekupaka uye kurasa marara nechikwata 2
Kusangana nevatungamiri vatatu vechikwata
Muenzaniso wezuva nezuva mushumo nhamba 2
Mumuenzaniso wechipiri uyu, Fabrice, murume wekutakura anobva mudunhu reParis, anotumira mushumo zuva nezuva kune iye mutsva wetsiya. Anotarisirwa kutumira chirevo ichi kweanoswera zvakanaka. Pakupera kwenguva ino, hurukuro itsva ichaitika pakati pavo kutsanangura mishando yayo mitsva. Uye netariro, rutsigiro rwemutungamiri waro mutsva webhonasi.
VERENGA Sarudza maitiro ane hunhu anosanganisa kuzvipira uye hunyanzvi
Kugadziriswa kwetiraki: macheki, kumanikidzwa kwetayi, shanduko yemafuta
COVID19 musangano wezvehutano
Kukoshesa kurongeka kwekugadzirira
Kuenda kubva kuimba yekuchengetera na9: 30 mangwanani
Kuunzwa kwemapasuru kudzimba dzevatengi: gumi nenomwe kutakura
Dzokera kuimba yekuchengetera na17 masikati.
Kuchengetwa kwemapaketi asina kufanirwa uye kupetwa kwemazano ezvekufambisa muhofisi
Kugadziriswa kwezvichemo zvevatengi, zvakarambwa kana zvakakuvadzwa zvinhu
Zvigadzirwa kuchenesa uye disinfection pamwe nevamwe vese timu
Muenzaniso wezuva nezuva mushumo nhamba 3
Semuenzaniso uyu wekupedzisira, anogadzirisa makomputa anoudza akapfuura ake mabasa ake ezuva nezuva. Nokutsanangura basa rinoitwa kumba uye kunoitwa kumutengi. Hapana chairo dambudziko, basa rinoenderera raro zvakadaro kunyangwe nguva yekuvharirwa.
Musoro: Chiitiko chiitiko che15 / 04/2020
9:30 a.m. - 10:30 aHOME
Kutaurirana neGuillaume kuti unzwisise zviri nani mhinduro dzatichapa kukambani XXXXXXXX.
Kudhizaina uye kuendesa kune kwevatengi sevhisi yekutanga yakatsanangurwa fungidziro.
10: 30 am - 11: 30 am HOME
Kugadzirwa kwemagwaro ekudzidziswa kwevashandi venguva pfupi.
11:30 am - 13:00 pm KUFAMBA
Setup network inogadziriswa uye chengetedzo yekambani ye XXXXXXXXXX.
Kuisirwa kwefoni yekudyidzana software.
14:18 pm - 00:XNUMX pm HOME
12 munhu mumwe nemumwe mutengi kugadzirisa.
Kuchaira kufona kwekupindira pane saiti.
Chirevo che chiitiko, chishandiso chakakosha chekuzivisa basa rako. Kubvumbi 25th, 2020Tranquillus
pashureDzidza kunakidzwa neSKILLEOS, e-kudzidza platform
zvinoteveraMhando yepamusoro yekuremekedza maemail ako
Sarudza magumo akakodzera emutsara weemail, asi unoita sei nezvazvo?
Ziva makodhi ekushandisa mumamiriro ehunyanzvi
Natsiridza chiperengo chako nevhidhiyo